LANDA I-Tomcat F14D X-Plane I-10 - iRikoooo
I-Tomcat F14D X-Plane 10
Usayizi 109 MB
Play 6 022
Umbhali: Sailor on X-Plane.org, Anthony Booher, Bary Lege
Kuyisimanga olukwazi super ngesivinini sonic lulu sound barrier (bheka isithombe yesibili). Sokuzenzela Ngaphandle kuba izinga okusezingeni, kuhlanganisa iphakethe umsindo, 21 repaints futhi 2D panel egcwele. Kufaka animations, ngemva sikaphalafini imiphumela: variable geometry amaphiko kanye nezinye yizimanga eziningi. Kubalulekile ukufunda imibhalo kufakwe iphakethe.
I Grumman F-14 Tomcat fighter aircraft eyayifakwe kuyi-geometry onhlobonhlobo. Owawenzelwa ukuvikela ngoxhaxha ukuhlaselwa zasemoyeni, kuba fighter wokuqala yakhelwe United States ukuhlanganisa izifundo War Vietnam. Yena waba emhlabeni odumile e 1986 sibonga movie Top Gun noTom Cruise.